China The ụkpụrụ ọrụ nke Power breeki Booster factory na suppliers | TieLiu
Agụụ agụụ na-eji ụkpụrụ nke inu ikuku mgbe injin ya na-arụ ọrụ, nke na -emepụta agụụ n'akụkụ nke mbụ nke booster. Na nzaghachi maka nrụgide dị iche nke nrụgide ikuku nkịtị n'akụkụ nke ọzọ, a na-eji nrụgide dị iche mee ka nrụgide braking sikwuo ike.
Ọ bụrụ na e nwere ọbụna obere nrụgide dị n'etiti akụkụ abụọ nke diaphragm ahụ, n'ihi nnukwu mpaghara nke diaphragm ahụ, a ka nwere ike ịmepụta nnukwu ihe iji mee ka diaphragm ahụ gaa na njedebe na nsogbu dị ala. Mgbe ị na - eme braking, sistemu agụụ na - ejikwa agụụ na - abanye na booster iji mee ka diaphragm na - agagharị, ma jiri mkpanaka push na diaphragm iji nyere mmadụ aka ịzọ ụkwụ na ịkwanye pedal breeki site na ngwaọrụ njem jikọtara.
Na steeti na-adịghị arụ ọrụ, mmiri iyi nlọghachi nke ihe na-achịkwa ihe nrụgide na-eme ka mkpanaka valve mgbanye na-agbanye n'ọnọdụ mkpọchi n'akụkụ aka nri, na ọdụ ụgbọ mmiri agụụ na-emeghe. Mmiri mmiri na-achịkwa na-eme ka iko valvụ na-achịkwa ya na oche ikuku ikuku dị nso, wee si otú a na-emechi ọdụ ụgbọ elu ikuku.
N'oge a, a na-agwa ụlọ gas na-ekpo ọkụ na ngwa ngwa nke ngwa ngwa na ọwa mmiri gas na-arụ ọrụ site na channelụ gas gas nke pistọn ahụ site na oghere valve na-achịkwa, ma dịpụrụ adịpụ na mpụga ikuku. Mgbe injin ahụ malitere, agụụ (nrụgide na-adịghị mma nke engine) na ọtụtụ oriri nke engine ga-ebili na -0.0667mpa (ya bụ, uru ikuku ikuku dị 0.0333mpa, na nrụgide nrụgide na nrụgide nke ikuku bụ 0.0667mpa ). N'ihe megidere ya, ihe nkwalite nkwalite na agụụ nke ngwa ngwa ahụ ruru -0.0667mpa, ha dịkwa njikere ịrụ ọrụ n'oge ọ bụla.
Mgbe braking, breeki breeki ahụ dara mbà n'obi, ike ya na - abawanye site na lever ma na - eme ihe na mkpanaka nrụgide nke valvụ a na - achịkwa. Nke mbu, oputara oge opupu ihe ubi nke ihe eji acho ihe nkpuchi, ya na ihe nleghari uzo ozo na iga n'ihu. Mgbe valvụ na-achịkwa valvụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu ebe iko valvụ na-achịkwa na-akpọtụrụ oghere valvụ ahụ, a na-emechi ọdụ ụgbọ mmiri agụụ. N'oge a, a na-ekewapụ ihe mkpuchi ume na ime ụlọ ngwa.
N'oge a, njedebe nke kọlụm ikuku ikuku dị na kọntaktị elu nke disk mmeghachi omume. Dika ihe nkpuchi valvụ na-achịkwa na-aga n'ihu, ọdụ ụgbọ mmiri ga-emeghe. Mgbe nzacha ikuku, ikuku nke mpụga na-abanye n'ime ụlọ ngwa nke booster site na ọdụ ụgbọ mmiri na-emeghe ikuku na ọwa na-eduga na ime ụlọ ikuku, a na-ewepụkwa servo ahụ. Ebe ọ bụ na ngwongwo nke mpempe akwụkwọ mmeghachi omume nwere ihe onwunwe anụ ahụ chọrọ nke nrụgide nha anya na nrụgide ahụ siri ike, ike ọrụ ahụ na-abawanye na oke ọnụọgụ (oke ọrụ ike) site na iji nwayọ nwayọ nke ntinye ikike nke njikwa valve push rod. N'ihi njedebe nke ike ọrụ, mgbe a na-enweta ike kachasị ọrụ, nke ahụ bụ, mgbe ogo agụụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ efu, ike nke servo ga-abụ ihe na-adịgide adịgide ma ọ gaghị agbanwe ọzọ. N'oge a, ike ntinye na ike nrụpụta nke booster ga-abawanye site na otu ego; mgbe breeki kagburu, valvụ njikwa na-achịkwa na-agaghachi azụ na mbelata nke ntinye ike. Mgbe a rutere ebe kachasị elu, mgbe emepere ọdụ ụgbọ mmiri agụụ, a na-ejikọ agụụ ume na ime ụlọ ikuku, ogo agụụ nke ụlọ ọrụ ga-ebelata, ike ọrụ ahụ ga-ebelata, na piston ahụ ga-aga azụ. . N'ụzọ dị otú a, ka ntinye ọsọ ọsọ ji nwayọọ nwayọọ na-ebelata, ike ọrụ ahụ ga-ebelata na oke ọnụọgụ (oke ọrụ ike) ruo mgbe breeki ahapụ kpamkpam.
Nchekwa onwe, Aftermarket breeki Booster, Ike breeki Booster, Agụụ breeki Booster, Booster Assy Brake, Breeki Servo,